Inhlangano ithi isaphila intatheli yakuleli osekuphele unyaka ithunjiwe eSyria | News24
Inhlangano ithi isaphila intatheli yakuleli osekuphele unyaka ithunjiwe eSyria
Johannesburg - Inhlangano iGift of the Givers ithi isinabo ubufakazi bokuthi intatheli yakuleli eyathunjwa, uShiraaz Mohamed, isaphila.
UMohamed wathunjwa eseSyria esikhathini esingangonyaka esedlule ehambisana nale nhlangano.
OLUNYE UDABA: Kusale dengwane abangu-160 kusha imijondolo eKapa
Le nhlangano ithi abathumbi bakhe bathumele umyalezo ngoDisemba bethi bayamazi ukuthi ukuphi. Inhlangano yabe isibhala imibuzo okwakumele iphendulwe uMohamed ukuze kuzoba nesiqiniseko sokuthi uyena ngempela yini.
Umndeni - ngokusho kweGift Of the Givers - ukuqinisekisile ukuthi nguMohamed kuphela obengakwazi ukuphendula leyo mibuzo abeyibuziwe, ngakho lokhu kusho ukuthi usaphila njengoba iphendulwe yonke kahle.